How to link blogspot with facebook page? — MYSTERY ZILLION
How to link blogspot with facebook page?
November 2014 edited November 2014 in Internet & Email
Blogspot လဲ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ facebook page လဲရှိတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ဘလော့မှာပဲ ရေးဖြစ်တော့တယ်။
Facebook pageမှာ မရေးဖြစ်တော့ဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ ဘလော့မှာ ပို့အသစ်တင်လိုက်ရင် facebook page မှာလဲ auto post တင်အောင်လုပ်ချင်တာ။ အဲလိုမျိုးလုပ်လို့ရလား သိချင်ပါတယ်။
Blogspot ကတော့ တိုက်ရိုက် Support လုပ်တာမရှိဘူး တခြား Third party တခုခုကို သုံးပြီးမှပဲရမယ်။ RSS Graffiti ကိုသံုးရင်တော့ RSS ကနေပြီး Facebook ကို Share လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ် စမ်းကြည့်ပေါ့ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး မဟုတ်ပါဘူး။
Thanked by 1 chindwinthar
စမ်းကြည့်ထားတယ်။ အဆင်ပြေလား မပြေဘူးလားဆိုတာကို ပြန်ပြောပါမယ်။